Ejipta - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Egipta)
I Ejipta na Egipta na ny Repoblika Arabon' i Ejipta dia firenena ao amin' ny faritra atsinanan' i Afrika Avaratra. Manana morontsiraka amin' ny Ranomasina Mena izy ao atsinanana ary amin' ny Ranomasina Mediteranea ao avaratra. I Kahira no renivohitr' i Ejipta. I Kahira (arabo: القاهرة / al-Qāhira) no renivohiny sady tanàna lehibe indrindra aty Afrika. Ireo firenena manodidona azy dia i Israely ao avaratra-atsinanana sy i Sodàna ao atsimo ary iLibia ao andrefana. Mivelatra mankany amin' ny tendro atsinanan' i Afrika Avaratra i Ejipta sady mitohy mankany Azia noho ny fisian' i Sinay. Izany toerana misy an' i Ejipta izany no iheverana azy ho isan' ny faritra Atsinanana Akaiky (na Azia Andrefana). Atao hoe مصر / Miṣr i Ejipta amin' ny teny arabo, fa مصر / Maṣr kosa amin' ny teny arabo egiptiana (fiteny ifaneraserana).
Teny Filamatra : «»
Praiminisitra Hazem Al Beblawl
Filoham-pirenena Adly Mansour
Velarantany 1 001 450 km²
- Hakitroka Lisitra tanàna araka ny mponina
Fahaleovantena 26 Jolay 1952
Finoana silamo : 90%;kôpta;katôlika
Sandam-bola sterlina ejipsiana
Faritra ora UTC +2
Faritra Internet .eg
Antso an-tariby 20
I Nily (na Neily), izay isan' ireo ony lava indrindra maneran-tany dia avokavoka ho an' i Ejipta: ao amin' ny lohasahan' i Nily sy amin' ny vinaniny ao amin' ny Ranomasina Mediteranea no ahitana ny ankamaroan' ny haren' i Ejipta. Ny 10 %n' ny tanin' i Ejipta monja anefa no misy mponina sady ahitana fambolena, ny sisa rehetra dia faritra karankaina. Laharana faharoa aty Afrika ny toekaren' i Ejipta sady manana ny akony dia lehibe dia lehibe ao amin' ny faritra Atsinanana Akaiky. Malalaka sady sahanin' ny sehatra tsy miankina ny toekaren' i Ejipta ankehitriny raha nampanarahin' ny fanjakana teti-pampandrosoana izany tany aloha. Ny fambolena no seha-pihariana lehibe indrindra any. Ny solitany sy etona voajanahary no loharanon-karena mampidi-bola be indrindra, toraka izany koa ny fizahan-tany, vokatry ny fisian' ny toerana manan-tantara ahitana ny fasan' ireo faraôna taloha (piramida).
I Ejipta tamin' ny Andro Taloha dia nandrosoan' ny sivilizasionan’ i Ejipta taloha. Taty aoriana dia ny Arabo miozolmana no nanjakazaka tao. Tamin' ny taona 1869 dia vita ny lakandranon' i Suez izay nampitohy ny Ranomasina Mediteranea amin' ny Ranomasina Mena sady lasa lalana falehan' ny raharaham-barotra mampitohy ny Tontolo Tandrefana amin' ny faritra Atsinanana Akaiky. Tamin' ny taonjato faha-20 dia teo ambany fahefana sy fiarovan' ny Britanika i Ejipta. Tamin' ny taona 1953 no nanambaràna ny fahaleovan-tenan' i Ejipta. Taorian' izany ireo disadisa maro nifanaovany tamin' i Israely.
Ny 99 %n' ny mponina dia miangona ao amin' ny 4 %n' ny vekaran-tanin' i Ejipta. I Ejipta no firenena be mponina indrindra ao amin' ny tontolo arabo. Ny 90 %n' ny mponina dia miozolmana fa ny 10 % kosa dia manarana ny fivavahana kristiana kôpta (Fiangonana Kôpta Ôrtôdôksa, Fiangonana Katôlika Kôpta, Fiangonana ara-Pilazantsara Kôpta). Ny fiteny arabo no fiteny ôfisialin' i Ejipta. Ny fiteny arabo egiptiana dia fiteny ifaneraserana am-bava ihany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ejipta&oldid=1012905"
Voaova farany tamin'ny 22 Jolay 2021 amin'ny 08:34 ity pejy ity.